Ixabiso eliphantsi lokushisa kwamaShishini elenzelwe ukuYilwa kweFan yokuThengisa abaThengi kunye neFektri | YiZheng
Yintoni iFanction yoBushushu beNdawo ePhakamileyo esetyenziselwe yona?
•Amandla kunye namandla: Isityalo samandla eshushu, Isityalo sokucoca inkunkuma, Isityalo samandla e-Biomass, isixhobo sokubuyisela inkunkuma kwimizi-mveliso.
•Ukunyibilikisa isinyithi: Ukuvuthuza komoya weeminerali zokucoca umgubo (Umatshini wokucoca), Imveliso yecoke yomlilo (iZiko leCoke yomlilo).
•Ukuhanjiswa kwegesi kunye nezixhobo: Ukuhanjiswa komoya ngokubanzi, ukuhanjiswa komoya obushushu obuphezulu, ukuhanjiswa kwegesi enokutsha, ukuhanjiswa kwegesi eyiCorrosive, iGesi exutywe nokuhanjiswa okungcolileyo.
•Ukuhanjiswa komgubo wamalahle, izinto zeParticle / izinto zePowder / izixhobo zeqhekeza / izixhobo zeFiber.
•Eminye: Uxinzelelo kunye noxinzelelo lwetayitile yezixhobo zorhwebo, Ukubuyiswa kwerhasi yenkunkuma yoshishino, Ukubonelela ngomoya kunye nokomisa ukutya kunye nemveliso yokuvelisa iziyobisi.
Iimpawu zoBushushu obuPhezulu bezoPhuculo eziCetywayo
•Ukuphuma koxinzelelo oluphezulu lwegesi, kunye nokubonelela ngesixa esikhulu sokuhamba komoya, ingxolo ephantsi.
•I-blades angle ihamba ngokusetyenziswa koyilo, ukunxiba okungaphezulu, ukuhlala ixesha elide kwinkonzo.
•Ngaba unokuhlengahlengisa ngokulula ivolumu yomqhubi kunye noxinzelelo ekusebenzeni komoya wedamper. Ngaba unokuhlengahlengisa uxinzelelo lwe fan kunye nevolumu ngokutshintsha isantya sefeni ngokuhambelana nokuhamba rhoqo kweemoto.
•Ukuhanjiswa okuphezulu kunye nokulahleka kwamandla kwenkqubo yomqhubi.
•Unxibelelwano oluguquguqukayo lwe-shaft ye-motor kunye ne-shaft yokuhambisa, akukho sidingo soxinzelelo okanye utshintshe ibhanti, umsebenzi ophantsi wokugcina umsebenzi.
•Ngaba ukwanelisa iimeko zokulayisha uthuli ezahlukeneyo.
•Ukugcina indawo yokugcina indawo enobushushu kunye neenzwa zokungcangcazela, kunokufaka ngokulula isixhobo esisebenza ngokujonga esweni.
•Ukukhetha ugcino lwamandla emoto yomqhubi waseTshayina ohamba phambili (okanye umthengi ofunekayo), umgangatho onokuthenjwa, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi.
•Uyilo ulwenziwo ngokweemfuno zomthengi.
•Ukwamkela ukuveliswa kwekhabhoni yentsimbi ekumgangatho ophezulu, okanye intsimbi engenasici kunye nezinye izinto zesinyithi ngokweemfuno zabathengi.
•Izinto ezahlukeneyo ozikhethelayo xa ukhetha.
Ubushushu obuPhezulu beMveliso obuBonakalise uyilo lweVidiyo yeFan
Amaqondo oMbane oPhezulu oShishino oYilwayo wokuYilwa kweModeli yoFan
Uxinzelelo olupheleleyo Pa
Ukuhamba m3/ h
Ukuhamba m3 / h
Egqithileyo Isitovu somoya oshushu
Okulandelayo: Inkanyamba yokuqokelela uthuli
Intshayelelo Isetyenziselwa ntoni iBelt Belt Conveyor? Ukuhanjiswa kweBelt yokuhambisa ephathekayo kunokusetyenziswa kakhulu kwimizi-mveliso yamachiza, amalahle, eyam, isebe lombane, ishishini elikhanyayo, iinkozo, isebe lezothutho njl. Ukuxinana kobuninzi kufuneka kube yi-0.5 ~ 2.5t / m3. Ku ...